Ukukhanselwa kwamadiphozithi | Ezezimali Zomnotho
Ngokuya ngemininingwane yakamuva evela eBhange LaseSpain, inzuzo ejwayelekile yamadiphozithi asebhange iqhubekile nokwehla ngonyaka we-2017 yaze yafinyelela okusha ephansi sonke isikhathi ku-0,08%. Lokho wukuthi, amaphesenti angu-0,02 akhomba ngaphansi kunangenyanga eyedlule. Kungani umkhuba wenzuzo yamadiphozithi asebhange usancipha? Ngabe uzoba yini umkhuba wenzuzo yamadiphozithi asebhange ngonyaka we-2018? Le ngeminye yemibuzo ebuzwa abanye abasebenzisi okwamanje.
Kepha kunesici esisodwa okungenzeka awukaze usicabange. Futhi yiyona ehlobene nesidingo sokukhokha imali ngesikhathi esithile ekutshalweni kwakho kwemali. Ebhekene nesidingo sokubhekana nezinye izindleko ezingalindelekile, landela amalungelo akho entela noma umane wenze khokha esinye isikweletu. Kulezi zimo, kwenzekani ngempela uma imali oyilondolozile igcinwe ngentela yethemu? Yebo, kufanele unake ngoba ungaba nokungaphezu kokukodwa inkinga ukwenziwa ngokusemthethweni kwalo msebenzi.
Kulesi simo esivamile, kufanele ukhumbule ukuthi ungabuyisa imali kusuka kumadiphozi ethemu. Kepha kungenzeka babeke izinhlawulo ezihamba ebangeni elihambayo kusuka ku-1% kuya ku-3%, enzuzweni etholakele. Lokhu ngokwenza kungasho ukuthi akuyona into enenzuzo ngoba izindleko ongaba nazo zifanele kakhulu. Vele, kuyisimo okufanele usicabangele ngaphambi kokuqasha lo mkhiqizo wokonga. Okuthile okungenzeki njalo ezenzweni ngamakhasimende asebhange.
1 Kuthiwani ngemali ekhokhwayo?
2 Ukuhlengwa okuncane futhi okuphelele
3 Azikho izinhlawulo noma amakhomishini
4 Izinhlawulo zithinta kanjani?
5 Khetha umnqamulajuqu omfushane
6 Iseluleko ngokukhansela
Kuthiwani ngemali ekhokhwayo?
Vele kunamacala akhetheke kakhulu. Njengoba kunjalo ngamadiphozi ohlobo oluthile, okusho ukuthi awwenzi nikela ngokheshi, uma kungenjalo, kunalokho, bakunikeza ngezipho zohlobo oluhlukile. Kulezi zinhlobo zokonga lapho uzoba nokungabaza okukhulu ngokukhanselwa kwalo mkhiqizo wasebhange. Vele, kulesi simo ngeke ukwazi ukusebenzisa imali oyongile. Ngeke ube nesinye isixazululo ngaphandle kokulinda usuku lwaso lokuphelelwa yisikhathi futhi uzinikeze imali ukuze ukwazi ukuphatha izindleko okuzodingeka ubhekane nazo kusukela lapho.
Ngalo mqondo, lesi sigaba se-impositions sifana kakhulu nalezo ze- phambili ukukhokha noma yenziwe ekuqaleni kokwenziwa kwayo ngokusemthethweni. Kulezi zimo, ngeke ukwazi ukwenza okutakuliwe noma ezimweni ezinhle kakhulu bazokunciphisa ezinzuzweni ezenziwe kuze kube yileso sikhathi. Kunoma ikuphi, bangamamodeli anezinkinga kakhulu futhi kuzodingeka ukuthi ulindele okungenzeka ngemali oyongile. Ngoba unganqikazi, ungaba nokumangala okungaphezulu kokukodwa okungathandeki okukodwa kusukela ngesikhathi uqashwa.
Ukuhlengwa okuncane futhi okuphelele
Esinye sezigameko ezingaphakama ngokungangabazeki ukuthi ungenza ukutakula okuyingxenye noma okuphelele ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwezinhlawulo nezindleko kubaphathi babo. Kodwa-ke, kujwayelekile kakhulu ukuthi uma wenza lo msebenzi ngeke ube nenye indlela ngaphandle kwalokhu ukuxoxisana ngenzuzo wentela ebhalisiwe. Futhi impela ngesilinganiso senzalo esingaphansi kunakuqala. Ngokwehla kwezingxenye ezimbalwa zephesenti kuqhathaniswa nesiphakamiso sokuqala. Kuphi kuzo zonke izimo uzolahlekelwa ngoba umholo wakho uzobe uphansi kunakuqala. Kufika ezingeni lokuthi bazonikeza inzuzo encane.
Enye yezinkinga ngokusebenzisa leli su ukuthi ekugcineni uzothola imali encane kakhulu, kumkhiqizo wasebhange osuvele wehlisiwe. Njengomphumela weqiniso lokuthi okwamanje intengo yemali endaweni ye-euro iku-0%. Lokho wukuthi, uzofika esiphethweni sokuthi akukufanele ukubhalisela lo mkhiqizo wokubhanga wemikhawulo ebuthaka enjalo emholweni. Kuze kufike ezingeni lokuthi ungalahlekelwa amandla okuthenga ngenxa yezindleko ezengeziwe zempilo ezikhonjiswa kumanani entengo yabathengi, eyaziwa kangcono njenge-IPC.
Azikho izinhlawulo noma amakhomishini
Ngakolunye uhlangothi, kunamanye amamodeli wokonga avumayo lokhu kungenzeka. Ngamanye amagama, ungenza ukuhlengwa okuyingxenye noma okuphelele ngokusebenzisa isikhathi sokubhaliselwe. Kepha ngaphansi kwezimo eziningana ukuthi kufanele wazi kusukela kumzuzu wokuqala. Ngoba phakathi kwezinye izizathu, isu lokuhweba abazosebenza kuwe kusuka ngomzuzu wokuqala lizoncika ekukunikezeni iholo eliphansi kunalelo obekuvunyelwene ngalo ekuqaleni lapho usayina intela. Kepha ngokuqiniseka kokuthi ngeke usetshenziswe noma yiluphi uhlobo lwezinhlawulo nganoma yisiphi isikhathi. Kungaba ngefomethi yekhomishini noma njengezinye izindleko zokuphatha.
Vele, lokhu kuzoba inketho evuna kakhulu izintshisekelo zakho ngoba ngeke ulahlekelwe yimali ekusebenzeni. Esikhundleni salokho, le nhlangano izosuselwa ekutheni unezinga lenzalo elingancintisani kakhulu kunakuqala. Okusho ukuthi, izokhipha ama-euro ambalwa kokusebenza ngakunye kwalezi zici. Kepha okungenani ungakhansela idiphozi ngeziqinisekiso ezinkulu ukubhekana nezimo zezikweletu ezivela manje. Ingesinye sezixazululo ezimbi kakhulu onazo njengamanje.
Izinhlawulo zithinta kanjani?
Enye yezinto okufanele uyihlole ngalolu hlobo lokunyakaza kokonga ukuthi lezi zinhlawulo zizokuthinta kanjani kusukela manje. Hhayi, lawa makhomishini ngeke asetshenziswe kufayela le- inani eliphelele lokonga. Vele akunjalo, kepha kuzokwenziwa enhlokodolobha okuyisihloko sokusulwa kokuqala. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, ngeke kuthinte sonke isikhathi sokuhlala kokuphoqelelwa. Ngokuphambene nalokho, kuzoba esikhathini esifaka usuku lokusulwa nokuphelelwa yisikhathi kwalo. Okusele ngeke kudingeke ukuthi kuguqulwe uma ukhetha ukukhansela lo mkhiqizo ukuze wongeke.
Ngalo mqondo, kubaluleke kakhulu ukuthi isikhathi sokuhlala esikhethiwe siyini. Ngoba impela, kungaba njalo Izinyanga ezi-3, 6, 12, 24 noma ngaphezulu. Lapho kungeke kuhlale kunomthelela ofanayo ezincazelweni ezinikezwe ngenhla. Akumangalisi ukuthi ukukhanselwa kwentela yesikhathi esifushane akufani nalokho okunikeza izinkathi ezingaphezu kwezinyanga ezingama-20. Ukwehluka kwabo kunani lenzalo abazokunikeza kuzohluka kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, awukwazi ukukhohlwa ukuthi uma leli gama lide, kuzoba nzima kakhulu ukwenza lo msebenzi.
Khetha umnqamulajuqu omfushane
Uma ungafuni ukuba nezinkinga ezeqile ngalolu hlobo lomkhiqizo, kuzoba ngcono kakhulu ukuthi ukhethe ifayela le- amagama amafushane emakethe. Ngaphezu kwalokho, umehluko wenzuzo ngeke ubanzi kakhulu ngokunikezwa okunikezwa izikhungo zezezimali ngalesi sikhathi. Uzoyeka ukuthola izilinganiso ezimbalwa zokweshumi zephesenti. Kepha ngenzuzo enkulu yokuthi kungenzeka ukuthi awudingi ukwenza noma yikuphi ukukhansela. Akungxenye noma ngokuphelele, ngakho-ke ngeke ube nezinhlawulo noma amakhomishini. Vele, ngalesi sikhathi kuzofanele ukhethe leli su lokonga.
Ngakolunye uhlangothi, kuzodingeka ukuthi uhlolisise ukuthi kunenzuzo yini ukukhokha le khomishini, ngoba nakanjani lo msebenzi wokubalwa kwezimali uzokunika kumunca ingxenye enkulu yenzalo ekhangisiwe ekuqaleni. Ngenkathi ukhetha imigomo emide, uzohlala unengozi enkulu yokuthi ungadinga imali yokukhokhela isikole sezingane, izibopho zakho zentela noma noma yisiphi isikweletu esisele ngaphambi kwabantu besithathu. Ngalokho ekugcineni awusoze waba nesinye isixazululo ngaphandle kokudonsa imali oyilondolozile ngokusebenzisa imali yesikhathi. Ngalokho ekugcineni uzolahlekelwa amandla okuthenga ekwenzeni ngokusemthethweni lo msebenzi esikhuluma ngawo kule ndatshana.
Uma ufuna ukwandisa le nhlangano ezobonakala esitatimendeni sakho semali engenayo, akukho okungcono kunokungenisa uchungechunge lweziqondiso zezenzo. Ukuthi kuzoba wusizo olukhulu uma ungumsebenzisi ojwayelekile walolu hlobo lwemikhiqizo yasebhange. Njengesibonelo, ezimweni ezilandelayo esikudalula kuzo ngezansi.
Okokuqala, udinga ukuqinisekisa ngempela isimo lapho imali yakho ingaba khona uma kufanele babatakule.
Yazi ukuthi yimaphi amatemu afaka lokho noma ngabe bayavuma noma cha ukukhanselwa kwayo, futhi ikakhulukazi zizokwenziwa ngokusemthethweni ngaphansi kwaziphi izimo.
Value i- Izikhathi zokugcina ezingcono kakhulu kuwe ukubhekana nezimo zesidingo semali futhi ngokuvamile ezithinta amagama amafushane, ngaphansi kwezinyanga eziyi-6.
El engozini ongayithola uma ubhalisa omunye wale mikhiqizo yasebhange. Ngokombono wokuthi ungabasindisa esikhathini esizayo esingekude kakhulu.
Uma kukuhle kuwe ukuthi ukhethe abanye amamodeli wokutshala imali aguquguqukayo evumela wena ukuthi ubuyise imali ngaphandle kwezinkinga. Isibonelo, izimali zokutshala imali, zombili imali engenayo engaguquki neguqukayo.
Zibuze ukuthi mhlawumbe inzuzo emenyezelwe yizinhlangano zebhange Akukona ekugcineni ozokukhokhisa. Kepha kuzoba yimali encane kakhulu futhi kuzokwenza uzibuze ukuthi ngabe kulula yini ukuthi usayine le nkontileka kusukela manje.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ukukhanselwa kwamadiphozithi
Iyini imali ekhokhelwa ubungozi?